Yan Aung: မြန်မာမှု နေရာတကာ ပြုလို့ရပါ့မလား…
မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါဖိုရမ်မှာ Blog, Blogging, Blogger စတာတွေကို မြန်မာမှုပြုဖို့ တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာလေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်….
ကျွန်တော်တစ်ခု စဉ်းစားမိတာ ပြောပြချင်ပါတယ်. ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားမှာ ဝေါဟာရတွေ ကြွယ်ပေမယ့် ဆက်လက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့၊ စကားလုံးအသစ်တွေ ထပ်ထည့်ဖို့ ပညာရှင်တွေဘက်က ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်. အစိုးရဘက်ကလည်း ဒီလိုလုပ်ရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။
တစ်ခြား ဘာသာစကားတွေ (ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စာ) ဆိုရင် နှစ်စဉ် စကားလုံး များစွာ ထပ်ထည့်ရပါတယ်.ပြောရတာ နည်းနည်းရှည်သွားပြီး လိုရင်း မရောက်တော့ဘူး.
ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားတီထွင်လိုက်တဲ့ စကားလုံး အတွက် အများလက်ခံနိုင်မနိုင်ဆိုတာ နည်းနည်း စဉ်းစားစရာပါ. တစ်ချို့ စကားလုံးတွေက မြန်မာလိုထက် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ သုံးလို့ ပိုကောင်းပါတယ်. အထူးသဖြင့် Computer နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Term တွေပေါ့.
Type Writer ကို လက်နှိပ်စက်လို့ နာမည်တပ်လို့ ရပေမယ့် Computer ကို ကွန်ပြူတာ လို့ပဲ မွေးစားစကားလုံး သုံးပါတယ်. အမာထည်၊ အပျော့ထည်လို့ ဘာသာပြန်ဆိုကြပေမယ့် ဘာသာပြန်ကိုသုံးရတာ ပိုပြီး နားလည်ရခက်ပါတယ်. Hardware, Software ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ရလွယ်လုိ့ နောက်ပိုင်း computer စာအုပ်တွေမှာ ဟာဒ့်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဆိုပြီး တိုက်ရိုက် မွေးစားလိုက်ပါတယ်..Programmer ကိုလည်း ပရိုဂရမ်မာလို့ပဲ တိုက်ရိုက်သမုတ်ပါတယ်.
Blogger, blogging စတာတွေဟာလည်း Computer Term တွေပါပဲ. Blog ဆိုတာ ကြိယာပါ. ကြိယာကို မြန်မာမှုပြုရတာ မခက်ပါဘူး။ စာကြောင်းရှည်သွားတာက လွဲလို့ ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်.
Blogger ဆိုတာကတော့ နာမ်ပါ။ နာမ်ကို အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ရတာ စကားလုံး သိပ်များများ စားစား သုံးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ တိုတိုရှင်းရှင်း နားလည်လွယ်ရပါမယ်.
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ Blogging ကို ဘလော့ဂ်လုပ်သည်လို့ပဲ ပြန်ပါ. Blogger ကိုတော့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ လို့ပြန်ပါ။ Blog ကိုတော့ ဘလော့ဂ်လို့ပဲ ပြန်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းရင် ပိုရှုပ်ပါတယ်။ စကားလုံးကို သွယ်ဝိုက်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဓိက က အသုံးတွင်ကျယ်လာရင် စကားလုံးတွေ ရင်းနှီးသွားပါတယ်
ဥပမာ. စီဒီ၊ စီဒီရွမ်၊ ဗီစီဒီ၊ အမ်ပီသရီး၊ ဟာဒ့်ဒရိုက်ဗ်၊ မမ်မိုရီ ..... အများကြီးပါ... စဉ်းစားလို့ကို မကုန်နိုင်ပါဘူး။ Website ကိုလည်း ၀က်ဘ့်ဆိုက်လို့ပဲ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ Definition တွေကို မြန်မာလို မသတ်မှတ်ပါဘူး။
ပညာရှင်တွေ သိပ်ကို စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတုိ့ နောက်ဆုံးမှာ မွေးစားစကားလုံးတွေကိုပဲ သုံးဖို့ informally ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်.